सुशान्तजस्तै दाङ्गकी एक २३ वर्षिया विवाहित युवतीले फेसबुक लाइभमा आएर आत्महत्या गरिन् । उनीहरु सबैले आत्महत्या गर्नुको कारण एक असल साथि नपाएर हो « गोर्खाली खबर डटकम
सुशान्तजस्तै दाङ्गकी एक २३ वर्षिया विवाहित युवतीले फेसबुक लाइभमा आएर आत्महत्या गरिन् । उनीहरु सबैले आत्महत्या गर्नुको कारण एक असल साथि नपाएर हो
छोरा, राम्रो अंकहरू ल्यायौभने, यो कलेजमा भर्ना पाईनेछ, यो कोर्स गर्यौ भने, यो रोजगार पाईनेछ । अरे यार, १० लाख विद्यार्थिहरू परीक्षामा बस्छन्, त्यसमध्ये १० हजार मात्र छानिएका हुन्छन्, बाँकीका ९लाख ९० हजार बच्चाहरु ? तिनीहरूलाई थाहा नै छैन कि अब के गर्ने ? किनकि यसबारे कहिले उनीहरूले तयारी नै गरेनन् । उनीहरूलाई लाग्छ कि उनीहरू परीक्षामा होइन जीवनमा असफल भई रहेका छन् । परीक्षाको नतीजाले निर्णय (decide) गर्दैन कि हामी बिजेता हौं कि हरुवा हौं । यो निर्णय त कोशिश (try) ले गर्दछ कि हामीले कोशिश कत्तिको गरेछौं वा गर्यौं कि गरेनौं ।”
“छिछोरे” चलचित्रको एक तस्विर ।
केही दिन अघि “छिछोरे” चलचित्र हेर्न पाएको थिएं । त्यसमा सुशान्त सिंहले बुवाको रोल गर्दा भनेको डायलग थियो ।
सुशान्त, यति राम्रा शब्दहरु स्क्रिप्ट पढ्दा पनि पढे हौला, एक्शनको समयमा पनि दोहोर्याऊ होला, डबिंगको समयमा पनि फेरी भनेउ हौला, तर असल जीवनमा किन बिर्सी हाल्यौ ?
प्रस्तुती : दीपबहादुर बडुवाल
तर यदि तपाइँसँग त्यस्तो साथी छ भने उसको मूल्य बुझ्नुहोस् … गै हाल्नुहोस एक साँझ त्यो साथी सँग चिया पिउन एउटा सानो चिया पसलमा … जीवन धेरै सुन्दर हुनेछ ….. !
याद राख्नुहोस यदि कसैले तपाइँको तनावसँग लड्न सक्छ भने त्यो हो तपाइँको साथी र उसँगको एक कप तातो चिया !!!
सुशांत सिंह राजपूत एक जीवन्त अभिनेताको आत्मालाई ईश्वर शान्ति प्रदान गरुन । उहाँको स्वर्गमा बास होस ।
यी ठाउमा १० दिनका लागि लकडाउन गरियको छ।